Izixhobo zokusebenza zeGalofu: Kusuka kwiTech Talk kwizinto ezithengayo ngoku
Ziziphi izinto ezintsha zegolfu ezithengiswa kwiivenkile zegalufu ngoku? Ziziphi iinkalo zobugcisa beeklabhu zegalufu? Baqala phi abaqalayo ukufumana izixhobo zokubanceda baqonde iintlobo ezahlukeneyo zeeklabhu kunye nezixhobo?
Siyakwazi ukugqamisa amanqaku kunye nempawu enxulumene nayo yonke loo mibuzo ... kwaye siya kuthi, apha apha kweli phepha. Siza kuqala ngokujonga iinto ezitsha kwiindawo zokuthengisa iimpahla zegalufa, ngoko uqhubeke ne-golf club club, ukunakekelwa kweqela kunye nokunye.
(Ukuba awufumani oko ufunayo kwelinye lezintlu ezilandelayo, zama ibhokisi lokukhangela.)
Iiklabhu zeGolf kunye neBhola kwiMakethe
Ngoko: Kuthekani malunga neeklasi zegalufa zakamuva kunye neebhola zegalufu? Amaphepha alandelayo akuxelela malunga (kwaye akubonise) izixhobo zakutsha kwicandelo ngalinye, ukukhutshwa okutsha kubakhiqizi abakhulu nabancinci.
Abaqhubi abatsha abaGoli
ENew Fairway Woods
Iiklabhu zeGolf ezintsha zeHlabathi
Iigulane ezintsha zeGalofu
Iibhola ezintsha zeGalofu
Izixhobo zeGalofu KwiMakethe
Ewe, iiklabhu kunye neebhola akuzona kuphela izixhobo zegalufu ezizifunayo okanye ezifunayo. Kukho izicathulo kunye neengxowa, umzekelo - ezimbini zezona zixhobo ezinkulu zegalufa.
Iifokethi ezintsha zeGolf (nazo ziquka iinqwelo ezintsha zee-push)
Izixhobo ezintsha zeGalofu (zakutshanje ... yonke into)
Abaqalayo: Hlangana neeKlabhu zeGolf
Ulwazi malunga negalufu eziphambili ezisezantsi ziphantsi, kodwa abaqalayo banemibuzo ebalulekileyo malunga neeklabhu zegalufu. Ngaphambi kokuba sifinyelele kwizinto ezingaphezulu zobugcisa, masihambe phezu kwezinto ezisiseko zeendidi ezahlukeneyo zeeklabhu:
Kwaye yethu imbonakalo yeentlobo ezahlukeneyo zeeklabhu zegalufu ziquka "Hlangana ne-Putter" icandelo.
Kuthiwani ngeeklabhu zegalofu zamakhosikazi? Uvuyo ucele:
Iiklabhu zamabhinqa: Yintoni oyaziyo, apho ukuthenga khona
Uthini umahluko phakathi kweeklabhu zamadoda kunye namabhinqa?
Enye imithombo yamatsha emidlalo kumdlalo yi- Golf Beginners FAQ , equka ezili-12 okanye ukungeniswa kwezixhobo, ezimbini zezi zinto zilandelayo:
Ngaba izicathulo zegalufu ezifunekayo zokudlala?
Ngaba iglafu yegalufu efunekayo ukuze idlale?
Izixhobo zoRhwebi: Izixhobo zeKlabhu yeGolf kunye neTech
Kuthiwani ngecala lobugcisa bezinto zokusebenza zegalufu? Ezi zimbini ze-FAQ zamanxeba zinceda ukucacisa iinkalo eziphambili zeeklabhu:
Kule khasi, uza kufumana uluhlu lwemibuzo malunga neengcali zobugcisa beeklabhu zegalufu. Okubaluleke ngakumbi, uya kufumana iimpendulo zale mibuzo. Luhlobo luni lwe-Q & Njengoko sithetha ngaye? Ngokomzekelo, nango ambalwa:
Yiyiphi 'umzuzu we-inertia' (MOI) kwiiklabhu zegalufu?
Yiyiphi 'isikhokelo sogumbeko' kwaye sichaphazela njani amahlumela?
Ukuphosa kunye nokwenza iingcingo zithelekisa njani?
Njengokuba kunjalo neClubs FAQ apha ngasentla, kweli phepha, sicamngca eminye imibuzo efunwa ngokuqhelekileyo malunga neengqungquthela kwiiklabhu zegalufu. Njengemizekelo, nango maxwebhu amathathu:
Kwenzeka ntoni ukuba usebenzisa i-shaft engalunganga?
Ingqungquthela yensimbi kunye negraphite ithelekisa njani, kwaye yintoni efanelekileyo kuwe?
Ngaba i-shaft torque into ethile yokugcoba igorha kufuneka icinge ngako?
Ukongeza kwi-FAQs, iigrama zesegrifi yezinto zokusebenza zegalu inikeza iinkcazo ezicacileyo zemiqathango efanayo kunye nesigama sesigama segalufa.
Kuthiwani ngeebhola zegalufu? Makhe siphinde siphendule imibuzo embalwa malunga nalawo maqabana amancinci esiqongqoza ngegolfu:
Mangaphi ama-dimples kwibhola yegolfu?
Uluhlu lweebhola lidibanisa njani neebhola zegalufu 'eziqhelekileyo'?
Ziyintoni na iinombolo kwibhola yegolfu?
Kwaye nje ukuzonwabisa, siya kuphosa kulo:
Ngaba Uyazi Amagama eeKlabhu zeGala zeMandulo?
Ama-Mashi, i-niblicks-kunye ne-mashie-niblicks - ngaba uyazi ukuba yiyiphi iiklabhu zegalufu zeemali ezibizwa ngeyona? Kwaye baxhomekeke njani kwiinkampani zanamhlanje neeklasi?
Ukunyamekela iClubs yakho yeGalofu
Izixhobo zeGalufa ziyakudala kakhulu, kuxhomekeke kwizinto ozikhethayo (kunye nebhajethi yakho). Kungakhathaliseki ukuba ungakanani imali oyichithayo, ukunyamekela izixhobo zakho kuya kukunceda ukuhlala ixesha elide kwaye wenze ngcono, njengoko kuchazwe kwi- 8 elula indlela yokunyamekela iiClubs zakho zeGalulo . Bona kwakho:
Indlela yokucoca iiklabhu zakho zegalufu
Indlela yokuhlambulula ngayo iiklabhu zakho (kwaye kutheni kufanele)
Ungagcina njani iiklabhu zegalufu
Izindwangu zokunyuka: I-Gear Key for Rock Climbing
Ulwahlulo lweCentromere neCromosome
Ngomculo we-Skating Skating
Incwadi yokuguquka kunye noko kuthetha ntoni kubantwana
Ukwahlula iMveli eNomlomo kaMichael Crichton
Isikhokelo kwiiNyanga ezingama-6 zeKhalenda yamaHindu
Ukubhiyozela i-Imbolc With Kids